Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Jardiinooyinkee qaranka Mareykanka ah ayaa ugu habboon qoyska?
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • jiga • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Cilmi baaris cusub ayaa muujineysa jardiinooyinka qaran ee ugu saaxiibtinimada wanaagsan qoysaska Mareykanka, iyadoo lagu saleynayo arrimo ay ka mid yihiin acres halkii booqde, 'waxay u fiican tahay soo jiidashada carruurta, dabeecadda iyo jardiinooyinka, celceliska heerkulka sanadlaha iyo roobka.
Jasiiradaha Virgin Islands waa beerta qaran ee ugu fiican dalxiisyada saaxiibtinimo ee Mareykanka.
Redwood ee Kaalifoorniya ayaa ku soo xigta, iyadoo leh dhibco 6.30 10kiiba.
Qaadashada booska saddexaad waa Big Bend Texas oo leh dhibcaha 6.26 10kiiba.
The USA waxay hoy u tahay qaar ka mid ah jardiinooyinka quruxda badan ee adduunka, oo ku habboon qoysaska jecel inay ka baxaan dabeecadda oo ay sahamiyaan quruxda dabiiciga ah ee dalkooda.
Laakiin waa kuwee jardiinooyinka qaran ee Mareykanka ee ugu fiican qoysaska inay booqdaan?
Xadiiqadaha qaran ee Mareykanka ee ugu wanaagsan qoysaska saaxiibtinimo
Jasiiradaha Virgin Islands ayaa ah jardiinada qaran ee ugu fiican dalxiisyada saaxiibtinimo ee Mareykanka, iyadoo wadarta guud ee dhibcaha ay tahay 6.58 ka mid ah 10. Iyada oo heerkulka labaad ee ugu sarreeya uu yahay 79.2 iyo 55% soo jiidashada lagu qoro inay u fiican yihiin carruurta.